“Kan Miralṭha pawl Suunnak”: CNDF – Meifar
“Kan Miralṭha pawl Suunnak”: CNDF
2021 June 29 Ni, zinglam 7:30 ihsi thokin Tualthat Acozah ralkap pawl le CNDF karlak ah nahzi2sung hrawng kahawknakathlengih, Tualthat Acozah ralkap lam inamalbik mi 20 an thi ih, tam nawn in hriamhma an tuarasi.
CNDF lam cun miralṭha ralkap5in ram le miphun hrang nunnak an hlanih mi3in thlaphan um lomi hriamhma an ngahasi.
Chin National Organization: “Chin National Defense Force ralkap, kan miralttha pawlasimi: (1) Salai Naing Aung (kum 22), (2) Salai Tial Hup (kum 41), (3) Salai Van Bawi (kum 22), (4) Salai Kyaw San Win (kum 23), (5) Salai Thawng Zel (kum 22) pawl cu 2021 June 29 ni ah anmah ih tiamkamnak an tuah vekin, ram le miphun dothlengnak hrang Chin Ramkulh, Falam Peng hmun pakhat ah Chin mipi humhim dingih raldo phahin ram le miphun hrang an nunnak an hlanasi.
Miphun dothlengnak hrangih an pumpek-awknak parah CNO/CNDF in upatnak sangbik kan pe ih, tantami sungkua pawl thawn bangrep in kan tuar zetasi.
CNDF တပ်ဖွဲ့ဝင် သူရဲကောင်းများ ဖြစ်ကြသော: ၁။ ဆလိုင်းနိုင်အောင် (၂၂ နှစ်), ၂။ ဆလိုင်းကျော်ဆန်းဝင်း (၂၃ နှစ်), ၃။ ဆလိုင်းတီာလ်ဟုပ် (၄၁ နှစ်), ၄။ ဆလိုင်းဗန်ဘွဲ့ (၂၂နှစ်), ၅။ ဆလိုင်းထောင်းဇဲလ် (၂၂ နှစ်) တို့သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၉) ရက်နေ့တွင် မိမိတို့သစ္စာပြုသောအမျိုးသားရေးနှင့် တော်လှန်ရေးအတွက် ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းမြို့နယ် ရှေ့တန်းတစ်နေရာတွင် ချင်းပြည်သူလူထုများ ကာကွယ်ရန် တိုက်ပွဲဝင်ရင်း နိုင်ငံနှင့် လူမျိုးအတွက် အသက်ပေးလှူသွားခဲ့ပါသည်။
အမျိုးသားတော်လှန်ရေးအတွက် ၎င်းတို့၏ ပေးဆပ်မှုအပေါ် CNO/CNDF မှ လေးစားဂါရဝပြုကြောင်းနှင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုနှင့် ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းနည်းကြေကွဲမိကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။ Rest In Power Our Fallen Heroes!
Rampi Thurawn Petu Le Suu Kyi Thurawn Petu Cu Kum7Sung Thawngtla Dingin A Thu An Ṭhencat